Nesorin’ny Google tao amin’ny Play Store ny lalao miantsehatra amin’ny fihetsiketsehana tao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Nesorin'ny Google tao amin'ny Play Store ny lalao miantsehatra amin'ny fihetsiketsehana tao Hong Kong
Moa ve fomba fanao amin'ny fanivanan-tena ara-politika ny nataon'ny Google?
Voadika ny 18 Oktobra 2019 5:40 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Italiano, русский, Ελληνικά, українська, English
Sary tao amin'ny Stand News
Navoaka tao amin'ny The Stand News tamin'ny 10 Oktobra 2019 ny dikan-dahatsoratra amin'ny teny Shinoa. Navoaka eto amin'ny Global Voices izay tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty ny dikanteny Anglisy .
Naato tao amin'ny Google Play ny hatra miantsehatra amin'ny finday miaraka amin'ny fitantarana mifototra amin'ny fihetsiketsehana ao Hong Kong vao haingana noho ny fanitsakitsahana ny «politika'ny hetsika saropady» ao amin'ilay sehatra. Andro vitsy lasa izay, nofoanan'ny Apple store ihany koa ny app (hatra) finday izay nanome toromarika mivantana ny toerana nisy ny fihetsiketsehana sy ny misy ireo polisy .
Natomboka tamin'ny 5 Oktobra ary nofoanana telo andro taorian'io ilay lalao finday antsoina hoe “Ny Revolisiona amin'ny Fotoanantsika”.
Manome ny antsipirihany momba ny toe-draharaha politika izay mitarika ny fihetsiketsehana miaraka amin'ny sarintany misy ny toerana hitrangany ao Hong Kong ny lalao.
Karazan'ilay mponina ao Hongkong izay diso fanantenana tamin'ny tsy fahombiazan'ny Hetsika Elo prô-demaokrasia tamin'ny tamin'ny taona 2014 sy noho ny fahasimban'ny toe-draharaha politika ao Hong Kong ilay mpandray anjara fototra/mpilalao. Tsy maintsy manapa-kevitra izy raha hanatevin-daharana ny hetsika manohitra ny fampodiana ny 9 Jona 2019. Miditra amin'ny lalao izy rehefa tapakevitra ary tsy maintsy manao safidy bebe kokoa toy ny hoe aiza ny toerana misy hetsi-panoherana tokony halehany, karazana fitaovana inona no tokony ho entiny miaraka aminy ary ny hoe tokony handray anjara amin'ny fihetsiketsehana manaraka ve izy sa tsia sy ny sisa . Mety hampidi-doza ny fanapahan-kevitra tsirairay (izany hoe fisamborana) izay misy fiantraikany eo amin'ny fivoarana manokan'ny mpandray anjara fototra, ny fifandraisany amin'ny hafa ary ny hevitry ny daholobe ao an-tanàndehibe.
Tao anatin'ny antsafa an-telefonina niarahana tamin'ny The Stand News, nilaza ilay mpamolavola ny lalao nandray solonanarana hoe “Spinner of Yarns” fa nahazo mailaka fampandrenesana avy amin'ny Google izy nilaza fa nanitsakitsaka ny “politikan'ny hetsika saropady” an'ilay orinasa ny lalao finday ary voatery naato. Araka ny fitsipika, ny hetsika saropady dia ilazana ny “votoaty izay heverina ho toy ny manararaotra na tsy mahay mandanjalanja ny maha saropady ny loza voajanahary, ny fifandirana, ny fahafatesana, na ny voina hafa.” Mandrara ny mpamolavola tsy hahazo vola noho ny “fifandirana na voina goavana ao anatin'ny fitrangàny” amin'ny alàlan'ny lalao video” ihany koa ny fitsipika.
Efa in-4500 no nisy nitroka ny lalao talohan'ny nanesorana azy ary efa nampidi-bola mitentina HKD1500 (manodidina ny 200 dolara Amerikana). Nanamafy i Spinner of Yarns fa atolotra ho an'ny Spark Alliance ny 80 isanjaton'ny vola niditra ho an'ny lalao izay fanampiana ara-bola ara-dalàna ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotra ary nametraka fitoriana tany amin'ny Google. Nangataka ny Google ihany koa izy mba hanazava ny antony namaritan'ny orinasa ny hetsika ao Hong Kong ho hetsika saropady ary nanontany tena izy raha toa ka fomba fanao amin'ny fanivanan-tena politika ny fihetsiky ny orinasa. Hoy izy:
Fomba fanao amin'ny fanivanan-tena izany raha toa ka azo tehirizina ao amin'ny Google Store ny lalao rehefa avy nesorina avokoa ireo teny rehetra manambara ny hetsi-panoherana ao Hong Kong.
Nianatra momba ny literatioram-pamoronana tany amin'ny oniversite i Spinner of Yarns ary niditra tamin'ny orinasan'ny Teknolojiam-baovao rehefa nahazo diplaoma. Niala tamin'ny asany izy ary nandany iray volana mahery tamin'ny famolavolana ny lalao.
Nanazava izy tao amin'ny lahatsoratra fanokafana tao amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra LIHKG mitovy amin'ny Reddit fa ny hisarika ny saina iraisampirenena momba ny toe-draharahan'ny hetsika any Hong Kong no tena tanjony.
Satria ahafahana mandefa hafatra amin'ireo mpanjifany rehetra ilay hatra (app) finday dia nikasa ny hampiasa izany ho fantsona ho an'ny fanavaozam-baovao ho an'ny hetsika any Hong Kong izy.
Betsaka ny orinasa vahiny no voampanga nilefitra tamin'ny faneren'ny governemanta Shinoa amin'ny fanivanana ny fihetsiketsehana any Hong Kong. Vao haingana ny orinasa Amerikana mpamokatra lalao Blizzard no nandrara ilay mpilalao e-sport iray tao Hong Kong [mg] tsy hifaninana tamin'ny lalao Hearthstone taorian'ny hiaka nataony momba ny teny filamatra manohana ny demaokrasia nandritra ny antsafa taorian'ny lalao.
Notsoahan'ny Apple tao amin'ny store-ny ny hatra (app) HKmap.live, izay mampahafantatra ireo mpisera ny toerana misy ny fihetsiketsehana sy ny fidinan'ny polisy taoriana kelin'ny niampangan'ny People’s Daily mpiara-dia amin'ny Antoko Komonista Shinoa ny orinasa ho nanampy ireo “mpirotaka” ao Hong Kong. Raha afaka nanampy ny mpisera hisoroka amin'ny fidirana amin'ny faritra misy fifandirana mahery vaika ilay hatra (app) dia nilaza ny Apple tamin'ny The New York Times hoe:
Mampiseho ny toerana misy ny polisy ny hatra (app) ary efa nanamarina izany niaraka tamin'ny Birao misahana ny Fiarovana An-tserasera sy ny Heloka Bevavan'ny Teknolojia ao Hong Kong izahay fa nampiasaina hikendrena sy hamandrihana ny polisy, handrahonana ny filaminan'ny besinimaro ity hatra (app) ity, ary nampiasa izany ny olon-dratsy mba hanaovana lasibatra ireo mponina any amin'ny faritra izay fantatr'izy ireo fa tsy misy mpitandro ny filaminana.
Nifandray tamin'ny Google ny Stand News mba hiresahana bebe kokoa momba ny fanesorana ny hatran'ny lalao finday (app). Tsy mbola namaly ny Google.